ကျောရိုးရှိသတ္တဝါ - ဝီကီပီးဒီးယား
Cambrian–Present ၅၂၀ mya–လက်ရှိအချိန်ထိ
အဓိကကျသော ကျောရိုးရှိသတ္တဝါအုပ်စုတစ်ခုစီမှ နမူနာများ။ နာရီလက်တံအတိုင်း ဝဲ အပေါ်မှ ယာ အောက်ဘက်သို့ Fire salamander (ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါ)၊ မိကျောင်း (တွားသွားသတ္တဝါ)၊ southern cassowary (ငှက်)၊ shrew (နို့တိုက်သတ္တဝါ)၊ ocean sunfish (Osteichthyes)
J-B. Lamarck၊ ၁၈၀၁
(အင်္ဂလိပ်: Alligator, lit. 'အဲလစ်ဂိတ္တာ မိကျောင်း')
ကျောရိုးရှိသတ္တဝါ ဆိုသည်မှာ အရိုးနု သို့မဟုတ် အရိုးတို့ ဖြင့် ဝန်းရံထားသည့် ကျောရိုး အာရုံကြော ပါရှိသော တိရစ္ဆာန် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစကားလုံးသည် ကျောရိုးတစ်ခုအဖြစ် တွဲဆက်ပေးထားသော အရိုးများဖြစ်သည့် ကျောရိုးဆစ် ဟူသော စကားလုံးမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောရိုးမပါရှိသော သတ္တဝါများကိုလည်း ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများ ဟုပင်ခေါ်ဆိုသည်။ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများတွင် ငှက်များ ၊ ငါးများ ၊ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ ၊ တွားသွားသတ္တဝါများ နှင့် နို့တိုက်သတ္တဝါများ ပါဝင်သည်။ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါ၏ အရိုးစု အစိတ်အပိုင်းများမှာ -
ဦးနှောက်ခွံ။ ဦးနှောက်ခွံ (သို့) ဦးခေါင်းခွံအရိုးသည် ဦး နှောက်ကို ကာကွယ်ပေးထားသည်။
ကျောရိုးဆစ်။ တွဲဆက်ထားသော အရိုးတိုလေးများဖြစ်သည့် တောင့်တင်းသော ကျောရိုးဆစ်များကို အဆက်များဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။ ၎င်းကျောရိုးသည် အထဲ၌ရှိသော ကျောရိုး အာရုံကြောမကြီးအား ကာကွယ်ပေးသည်။ ကျောရိုးဆစ်များ အကြားရှိ အရိုးဆက်များကြောင့် ကျောရိုးအား ကွေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အရိုးများ။ ခန္ဓာကိုယ်၏ ပျော့ပျောင်းသော တစ်သျှူးများကို ထောက်ပံ့ကာကွယ်ပေးပြီး ကြွက်သားတွယ်ဆက်မှုအတွက် အမှတ်နေရာများ ပေးသည်။
ပါးဟပ် (သို့) အရိုးကွေး။ ငါးများ၏ pharynx ၌ ပါးဟပ် အရိုးကွေး နှင့် အချို့ ကုန်းနေရေနေ သတ္တဝါများတွင် ပါးဟပ် ကို ထောက်ပံ့သည်။ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါအများစုတွင် ပါးဟပ်အရိုးကွေးသည် မေးရိုး ကဲ့သို့ အခြားကိုယ်အင်္ဂါများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။
ကျောရိုးရှိသတ္တဝါ နမူနာများမှာ နို့တိုက်သတ္တဝါများ ၊ ငှက်များ နှင့် ငါးများ ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ်ပေါင်း သောင်းဂဏန်း အနည်းငယ်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါမျိုးစိတ် အနည်းဆုံးလေးမျိုးကို ဖော်ပြရန် "ငါး" ဟူသော စကားလုံးကို အသုံးပြုရသည်။
၂ ဇီဝမျိုးခွဲခြင်းနှင့် အမျိုးအစား
ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများသည် ပတ်ဝန်းကျင် အားလုံးနီးပါး၌ လွှမ်းမိုးသည်။ ၎င်းတို့သည် အဓိက ဂေဟစနစ် တစ်ခုစီတွင် အကြီးဆုံးသော တိရစ္ဆာန်များအနေဖြင့် ပါဝင်ကြသော်လည်း၊ အကြီးဆုံး သက်ရှိများ မဟုတ်ပေ(သက်ရှိအဖြစ် စဉ်းစားရာတွင် သစ်ပင်များကိုပါ ထည့်သွင်း သုံးသပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်)။ ၎င်းတို့သည် လိုက်လျောညီထွေနိုင်သည့် ခုခံအားစနစ် ရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော တိရစ္ဆာန်များဖြစ်သည်။  ဤအချက်နှစ်ချက်သည် ဆက်စပ်နိုင်သည်။
Agnatha (မေးရိုးမဲ့ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါ)
Gnathostomata (မေးရိုးပါ ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများ)
Placodermi (Paleozoic ကာလမှ အကြေးခွံအထပ်ပါ သတ္တဝါများ)
Acanthodii (Paleozoic ကာလမှ ကျောရိုးရှိ ငါးမန်းများ)
Actinopterygii (ငါးလိပ်ကျောက် မြှီးရှည်)
Tetrapoda (ခြေလေးချောင်း သတ္တဝါများ)
Sauropsida (တွားသွားသတ္တဝါများနှင့် ငှက်များ)
Lepidosauria (အိမ်မြှောင်များ၊ မြွေများနှင့် tuatara)
Synapsida (နို့တိုက်သတ္တဝါကဲ့သို့ ခြေလေးချောင်းသတ္တဝါများ)
↑ "The Ediacaran emergence of bilaterians: congruence between the genetic and the geological fossil records" (2008). Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363 (1496): 1435–1443. doi:10.1098/rstb.2007.2233. PMID 18192191.
↑ Nielsen C. (2012). "The authorship of higher chordate taxa". Zoologica Scripta 41 (4): 435–436. doi:10.1111/j.1463-6409.2012.00536.x.
↑ Janeway C.A. 2001.
သစ်ပင်၏ အသက်ဝိဉာဉ် Archived 22 April 2021 at the Wayback Machine.
Tunicates များနှင့် cephalochordates မဟုတ်သူများသည် ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများ၏ အနီးကပ်ဆုံးဆွေမျိုးများဖြစ်သည်
ဝီကီမျိုးစိတ်တွင် Vertebrata နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ ရှိသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျောရိုးရှိသတ္တဝါ&oldid=727236" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။